भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री बाजपेयीको निधन
सेयर बजार : कस्तो रह्यो नयाँ आर्थिक वर्षकाे पहिलाे महिना ?
भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री बाजपेयीको स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक
पाइलैपिच्छे करैकर, तर सुविधा खोइ सरकार ?
सफ्टएडले २४ अगस्टमा स्कलरसिप डे गर्ने
नयाँ मुलुकी ऐन : के अपराध गरे कस्तो सजाय ?
#farakक्षमताः अपांगता हुँदैमा जीवन समाप्त हुने होइन
सन्दीपले २ विकेट लिए पनि प्याट्रियट्स पराजित
गृहमन्त्री र वनमन्त्रीबीच छलफल
‘सोल्टी’ र ‘मितिनी’ लाई चीन पठाईंदै
शुक्रबारदेखि विभिन्न पुराना ऐन खारेज हुने, नयाँ कार्यान्वयनमा आउँदै
मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि अब दुई वटा विधेयक ल्याउन बाँकीे
कर बढाएको विरोधमा प्रदर्शन
अफगानिस्तानः पढिरहेका बिद्यार्थीमाझ आत्मघाति बिस्फोट, ४८ जनाको मृत्यु
कोमल वलीलाई सन्तोष लामाका प्रश्न
१९ फागुन २०७४, शनिबार
कहिलेकांही योजना नबनाइएका कुराहरु नै बढी रमाइला हुँदा रहेछन् । अकस्मात् र आश्चर्यजनक लाग्न सक्ने त्यस्ता केही संयोगले नयाँ कामको थालनी चाहिँ हुनसक्दो रहेछ ।
यो ‘सेलेब्रिटीसँग सेलेब्रिटी’ स्तम्भ पनि त्यही आकस्मिकताले जन्माएको एउटा फरक प्रारम्भ हो । लामो तयारीविना बुधबार अपत्यारिलो ढंगमा यो स्तम्भको जन्म भयो । र, यसको श्रेय जान्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा गायिका कोमल वली र गायक सन्तोष लामालाई ।
उहाँहरु दुईको बुधबारको भेट एउटा ‘को–इन्सिडेन्ट’ थियो । फरकधारडटकमको न्युजरुममा कोमल दिदीलाई देखेपछि मेरो लामो समयदेखिका निकटका मित्र सन्तोष अचम्ममा पर्नुभयो । किनकि सन्तोषजी ‘बाटो परेकाले’ फरकधारको न्युजरुमसम्म आउनु भएको थियो ।
त्यसको केही मिनेटअघि मात्र उहाँको र मेरो फोन सम्पर्क भएको थियो–
‘सर, एकैछिन बाहिर निस्किनु न ।’
‘होइन सर, अफिसमै आउनु न, एकछिन बसौँ ।’
‘अफिस अगाडि नै छु, कफी खान जाऔँ अनि फर्किऔंला ।’
‘आउनु पहिले, अनि कफीका लागि निस्कौँला ।’
यो संवादमा मैले अफिसमा ‘कोमल दिदी पनि हुनुहुन्छ’ भन्ने जानकारी सन्तोषजीलाई दिइनँ । त्यसैले पनि हुनुपर्छ, सन्तोषजीले कोमल दिदीलाई अफिसमा ‘एक्सपेक्ट’ गर्ने कुरै भएन ।
‘ओहो दिदी,’ देख्नेवित्तिकै सन्तोषजी आश्चर्यमा पर्नुभयो, ‘नमस्कार, अनि बधाई छ दिदी ।’
‘लौ सन्तोष, बस । धन्यवाद,’ कोमल दिदीले लामालाई सोध्नुभयो, ‘के छ तिम्रो खबर ? के गर्दै छौ आजभोलि ?’
‘यसै दिदी,’ सन्तोषजीले आफ्नै ठट्यौली पारामा जवाफ दिनुभयो, ‘त्यस्तो केही गर्न सकेको छैन ।’
हामी यति बेला कोमल दिदीको एउटा सानो ‘सट’ लिन तयारी गरिरहेका थियौँ । क्यामेरा तयार भइसकेको थियो । त्यसैले, हामी ‘एक्सन कट’तिर लाग्यौँ, सन्तोषजी–कोमल दिदीबीचको वार्ता कतै नपुगि सकियो ।
एउटा छोटो ‘प्रोमो’ ‘सुट’ भएपछि सन्तोषजीलाई अनुरोध गरेँ– तपाईं अब क्यामेराअगाडि जानुहोस् ।
‘लौ, क्या फँसियो,’ सन्तोषजीले आफ्नो पुरानै शैलीमा ठट्टा गर्नु भयो । यो पनि अत्यन्त सानो ‘टेक’ थियो, २–४ मिनेटमा नै सकियो ।
त्यसपछि कोमल दिदी र सन्तोषजीबीच २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि रसुवा, गोरखा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा एउटै टोलीमा रहेर कार्यक्रममा गएको प्रसंग निस्कियो ।
‘ती दिनका बात’ सकिएको छनक दिएजस्तै सन्तोषजीले कोमल दिदीलाई सोध्नुभयो– तपाईं त राजनीतिमा लाग्नुभयो दिदी, अहिले त निकै व्यस्त हुनु हुँदो हो?
कोमल दिदीलाई यो प्रश्नको जवाफ दिन दिइनँ मैले ।
क्यामेरमा रहेका रोशन भाइलाई ल रेकर्ड गरौँ भनेँ । अनि सन्तोषजीलाई फेरि अनुरोध गरेँ– अघिकै प्रश्न सोध्नुस् त प्लिज ।
सन्तोषजी क्यामेरातर्फ हेरेर के सोध्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले फेरि रोकेँ । यो त एउटा कार्यक्रमको एपिसोड नै हो । कार्यक्रमको नाम– सेलेब्रिटीसँग सेलेब्रिटी ।
ल, सन्तोषजी सुरु गर्नुस् । त्यसपछि सुरु भयो, सन्तोषजी र कोमल दिदीबीचको कुराकानी । सन्तोषजीको पहिलो प्रश्न सुरु गर्दा नगर्दै म सुटिङ भइरहेको रुमबाट बाहिर निस्किएँ । त्यसपछि यो स्तम्भको पहिलो अन्तर्वार्ता मैले पनि भिडियोमा नै हेरेँ :
कस्ता पुस्तक पढ्छन् प्रधानमन्त्री ओली ?
(ब्लग) फेसबुके र ट्विटेहरुको नाममा
प्रत्येक दिन ६ वटा सम्बन्धविच्छेद
पुटिनले दिएका थिए यात्रुवाहक विमान खसाल्ने आदेश
भी टेनको गीतले जन्माएको प्रश्न
#farakक्षमताः एउटै खुट्टाले छमछमी
[अन्तर्वार्ता] अब देश समृद्धिकाे ट्र्याकमा अाएकाे छ: प्रदीप ज्ञवाली
संस्मरणः कोलकाता यात्राको त्यो सुटकेस
अमर गिरीकाे ‘पुनः नारायणहिटी’
झांगिँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको जालो
कोमल वलीको तिज गीत– माननीय ज्यू
कोमल वली र बहिनी प्रज्ञाको तिज गीत ‘आउ दिदी बहिनी हो’
फरक धारका अन्य समाचार
फरक इनिसिएटिभ्स् प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित | सर्वाधिकार सुरक्षित फरक इनिसिएटिभ्स् प्रा.लि. २०१७ | दर्ता न: ७५६/०७४-७५
समाचार तथा लेख रचनाका लागि
फोन : ०१–४४९९०८४
फोन : ०१–४४९१६६१